धादिङमा एम्बुलेन्सको चरम लापरबाहीः सरकारी अनुदानको एम्बुलेन्स नै गायब !
अनुदानको एम्बुलेन्समा रजाईँ
By: रमेश महर्जन
मा प्रकाशित 585 पटक हेरिएको
धादिङ, मंसिर १५ । रुडेक नेपालले धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका ४ मा रहनेगरी ढोला चैनपुर र खरीका नागरिकलाई सेवा दिने भनी सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स अहिले काठमाडौंमा चलिरहेको बुझिएको छ । सरकारी अनुदानमा लिएको सो एम्बुलेन्स झण्डै ६ लाखको हाराहारीमा बेचेको खुलासा भएको छ ।
तर, सरकारी अनुदानमा किनिएको एम्बुलेन्स बेच्न पाईदैन । एम्बुलेन्स निश्चित कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पनि लैजान पाईदैन । सरकारको नीति भन्दा बाहिर गएर एम्बुलेन्स बेचबिखन भएको खुलासा भएको हो । साँधभञ्ज्याङदेखि बिरामी ल्याउने भनेर किस्तामा निकालिएको एम्बुलेन्स पैसा तिर्न नसकेपछि यस्तो अवस्थामा आएको यातायात व्यवसायी उमेशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
झण्डै ६ लाखमा किनबेच
एम्बुलेन्स किन्दा प्रवुद्ध सहकारीमा तिर्न बाँकी किस्ता झण्डै ३ लाख रुपैयाँ, सिप्रदीमा तिर्न बाँकी झण्डै ३ लाख रुपैयाँ र बैरेनीमा दुर्घटना हुँदा ३० हजार रुपैयाँ गरी ६ लाख भन्दा धेरै आफूले तिरिदिएको ग्रामिण यातायात सहकारी सहकारी संस्थाका यातायात व्यवसायी उमेश कुमार श्रेष्ठले बताए ।
लागेको रकम चक्रबहादुर भण्डारीलाई साक्षि राखेर आफुले तिरिदिएको भन्दै उनले भने,–‘त्यो रकम बेहोरेर धादिङ अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक मिलन भण्डारीले चलाएको हो ’ अहिले त्यो एम्बुलेन्स कहाँ छ भन्ने कुरा आफूलाई समेत थाहा नभएको उनले बताए । आफू व्यवसायी भएका नाताले व्यवसाय गर्ने जिम्मेवारी मात्रै लिएकोले त्यो एम्बुलेन्स चालक मिलन सँगै छ वा अन्त कत्तै पुगिसक्यो त्यो आफूलाई जाजकारी नभएको उनले बताए ।
सांसद विकास कोषको रकम रुडेकका अध्यक्षबाटै गायब
व्यावसायी श्रेष्ठले एम्बुलेन्स किन्दा लागेको खर्च बेहोर्नका लागि पूर्व सांसद रवीन्द्र प्रताव शाह मार्फत सांसद विकास कोष मार्फत ३ लाख रुपैयाँ समेत लिईएको बताए । त्यो रकम एम्बुलेन्स किन्दा तिर्नुपर्ने बाँकी रकममा खर्च नभई हिनामिना भयो । रुडेक नेपाल धादिङका अध्यक्ष सन्तोष सिंखडा र रामसिंह तामाङको मिलेमतोमा सांसद विकास कोषको रकम हिनामिना भएको सन्तोषको भनाई छ । ती दुईजनाकै बदमासीका कारण एम्बुलेन्सको लापरबाही भएको उनको तर्क छ । आफु यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले आफूले यातायात व्यवसायीको हिसाबले मात्रै काम गरेको उनले बताए ।
कहाँ छ एम्बुलेन्स ?
रुडेकको त्यो एम्बुलेन्स धादिङ अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक मिलन भण्डारीले किनेर काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको बुझिएको छ । विरामी बोक्न भनेर किनिएको त्यो एम्बुलेन्स अहिले काठमाडौंमा शव बोक्न प्रयोग हुँदै आएको छ । सरकारी अनुदानमा किनिएको त्यो एम्बुलेन्स झण्डै ६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रकम तिरेर मिलन भण्डारीको हातमा पुगेको हो । अहिले जहाँ सञ्चालन गर्ने भनेर किनिएको हो, त्यहाँ सञ्चालनमा छैन ।
ज्वालामुखीको लागि ल्याईएको एम्बुलेन्स अहिले काठमाडौंतिर चल्न थालेको आफू स्वयंले पनि देखेको एक एम्बुलेन्स चालकले बताए । एम्बुलेन्स धादिङमा नदेखिएको झण्डै १ महिना भएको भन्दै उनले यो नियम विपरित नै रहेको बताए ।
अरु एम्बुलेन्स पनि बेबारिसे
रुडेकले सञ्चालनमा ल्याएको यो एम्बुलेन्ससँगै लायन्स क्लबको एम्बुलेन्स पनि धादिङवेशी सदरमुकाममा बेबारिसे बनेको छ । लामो समयदेखि लायन्सको एम्बुलेन्स धादिङ अस्पताल अगाडी बेबारिसे अवस्थामा रहेको त्यहाँका स्थानीयबासिन्दाले बताएका छन् । गाउँमा बिरामीले एम्बुलेन्स नपाउने तर धादिङबेशीमा यसरी बेबारिसे अवस्थामा एम्बुलेन्स भेटिएपछि चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।
शव बहानको अभावमा एम्बुलेन्सको प्रयोग
धादिङमा अहिले ४० भन्दा धेरै एम्बुलेन्स छन् । ती एम्बुलेन्समध्ये झण्डै १० वटा एम्बुलेन्स सदरमुकाम धादिङबेशीमा संचालन हुन्छ । बाहिरबाट शव वाहन ल्याउन महंगो हुने भएपछि एम्बुलेन्सलाई नै शव बोक्न बोलाउने गरेको छ । ‘यो हाम्रो बाध्यता हो, एम्बुलेन्समा शव बोक्न नहुने हो तर शव बहान नभएकाले त्यसो गर्नुपरेको छ– एम्बुलेन्स चालक भेषराज ठकुरीले भने ।’
धादिङ अस्पतालमा एम्बुलेन्स बाहिर, नीजी गाडी भित्र
जिल्ला अस्पताल धादिङमा अहिले एम्बुलेन्स अस्पताल बाहिर नै बेबारिसे अवस्थामा देखिन्छन् । एम्बुलेन्सका लागि भनेर छुट्याईएको अस्पताल परिसरभित्र नीजि गाडीहर देखिन्छन् ।
अस्पताल व्यवस्थापनको लापरबाहीले आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने एम्बुलेन्स अस्पतालको कम्पाउण्ड बाहिर रहेको एक एम्बुलेन्स चालकले बताए ।